အိမ်မြေဖယ်ရှားပေးရမယ့် ပုသိမ်ကြီးဒေသခံတွေ အသနားခံ
မန္တလေးတိုင်း ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ အစိုးရပိုင် မြေနေရာတွေမှာ ကျူးကျော် ၀င်ရောက် နေထိုင်သူတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ မနေ့က မန္တလေး မြို့တော်ဝန် ကိုယ်တိုင် ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် ၁၀၀ နီးပါး ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကနေ မြို့တော်ဝန်ကားကို ပိတ်ဆို့ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေ ထဲကတော့ ဒီမြေတွေဟာ သူတို့ ၀ယ်ယူထားတာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ငိုယိုတောင်းပန် တာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောပါတယ်။ အခြေအနေတွေ တဖြည်းဖြည်း တင်းမာလာခဲ့ပြီးနောက် မြို့တော်ဝန်က ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကို သီတင်းတပတ် အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ မနန္ဒာချမ်း က တင်ပြထားပါတယ်။
At 9/23/2012 11:28:00 PM No comments:
တရုတ်နဲ့ မြန်မာ လူထုဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေလိုဟု ဒေါ်စုမှတ်ချက်ချ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြား အစိုးရတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးထက် ပြည်သူလူထုအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး တိုးတက်တာကို လိုလားတယ် လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းက ဒီမိုကရေစီကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ စနေနေ့က နယူးယောက်မြို့ရှိ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
At 9/23/2012 11:19:00 PM No comments:
ကျမ နာမည် မ၀င်းပါ။ မြ၀တီမြို့ကပါ။ ကျမတို့မှာ ကလေး ၂ယောက်ရှိလာတော့ စီးပွားရေး ကျပ်တည်း လာ တယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ဟာ ပွဲစား ကျော်စိုး နဲ့ ဆက်သွယ်ရပြီးတော့ တစ်ယောက် လုပ်တာကို လမ်းစရိတ် ဆပ်။ တစ်ယောက်လုပ်အားခကို မိသားစုတွေ ပြန်ပို့ ဆိုပြီး ပွဲစားကျော်စိုး နဲ့ကတိစကားပြောပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ် တစ်နှစ် ကျော်က မဟာချိုင်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။
ကျမတို့ မဟာချိုင် နေ၀စ်အရပ်က ဆန်းဒစ် ဆိုတဲ့ ပုဇွန် အလုပ် ရုံ တစ်ရုံကိုရောက်တော့မှ အဓမ္မခိုင်းစေခံ ရပြီ ဆိုတာသိလိုက် ရတော့တယ်။ လူကုန်ကူးခံရပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတော့တဲ့အချိန်မှာ ကျမတို့ ထွက်ပြေးလို့ မလွတ်တော့ဘူး။
At 9/23/2012 11:04:00 PM No comments:
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးက စော်ကားတဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်သူကို သတ်ဖို့ ဆုငွေထုတ်
မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ မှာ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တမန်တော် မိုဟာမက် ကို
သရော်တဲ့ ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးခဲ့သူကို သတ်ဖြတ် နိုင်တဲ့သူကို ဒေါ်လာ
တသိန်း ဆုပေးမယ်လို့ ပါကစ္စတန် အစိုးရ ဝန်ကြီးတဦးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ညွန့်ပေါင်း အစိုးရမှာ မီးရထား ဝန်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင် နေတဲ့ ဂူလမ် အာမက် ဘီလား က တာလီဘန် နဲ့ အဲလ်ခိုင်းဒါး အဖွဲ့ဝင်တွေကို လည်း သူ့အခေါ်အရ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင် ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
At 9/23/2012 10:17:00 PM No comments:
စက်တင်ဘာ ၁၉ရက်ထုတ် မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ် အတွဲ(၄)အမှတ်(၃၆)တွင်ပါရှိသည့် ဆောင်းပါးကိုထုတ်ယူတင်ပြချက်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိုက်အ၀န်း မရှိဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေး မရှိနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော် စောဒက တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိုက်အ၀န်းတစ်ရပ် အယူအဆကို နိုင်ငံတွေရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုနဲ့ ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရယူနိုင်မလဲ။ နိုင်ငံတွေမှာ အကျိုးစီးပွား တွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံမူတွေတော့ မရှိကြပါဘူး။ ကမ္ဘာလုံး ဘုံအကျိုးစီးပွားကို သူတို့တွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှု လက်ထဲမှာ ဘယ်လို ထားခဲ့နိုင်မလဲ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံသားတွေဟာ
At 9/23/2012 09:45:00 PM No comments:
လွှတ်တော်အမတ်ဦးမြင့်အောင်အား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှရုတ်သိမ်းရေး မဲဆန္ဒရှင်များကြိုးပမ်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်တိုက်ကြီးမြို့နယ် ဥက္ကံမြို့အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ်မြေမှ လွှတ်တော်အမတ် ဦးမြင့်အောင်အား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရေးအတွက် ယင်းမဲဆန္ဒနယ်ရှိ ဒေသခံများက ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
At 9/23/2012 09:44:00 PM No comments:
စင်္ကာပူနိုင်ငံက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး
သာယာသောနံနက်ခင်းမို့ခါ တိုင်းလျှောက်နေကျ အနီးရှိ သဘာဝ တောအုပ်နှင့် အချိုးတကျ လူပြုပြင်ထားတဲ့ အပန်းဖြေသစ်တောဥယျာဉ်ဘက် လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ငှက်ကလေးများ တေးသီဧရိယာ - Birds Singing Area ဘက် ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာပြီး ကျောက်ထိုင်ခုံတန်းတစ်ခုပေါ် ထိုင်ရင်း ငှက်ကလေးများတေးသီသံကို စိတ်အေးချမ်းစွာ နားဆင်မိပါတယ်။
At 9/23/2012 07:49:00 PM No comments:
ပင်ပန်းလွန်းလို့ အလုပ်ထဲ အာရုံနှစ်မရ ဖြစ်နေပါသလား။ မနက် အိပ်ရာနိုးတဲ့ အခါမှာတောင် မလန်းဆန်းဘဲ ပင်ပန်းနေပါသလား။ သင့်ခန္ခာကိုယ် အားအင် ကုန်ခန်းနေလို့ ပင်ပန်းနေခြင်းပါ။ Coenzyme Q 10 ဓာတ်ချို့တဲ့နေခြင်းက အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Coenzyme Q10 (CoQ10) ဆတာ ဗီတာမင်ဓာတ် လိုအရာဖြစ်ကာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆဲလ်တိုင်းမှာ ပါရှိနေပါတယ်။ ဓာတုစွမ်းအင်ဖြစ်တဲ့ Adenosine Triphosphate (ATP) ထုတ်လုပ်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ CoQ10 မရှိပါက ထိုစွမ်းအင် ဖြစ်ပေါ်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။ ထိုစွမ်းအင် မရှိပါက အားလည်းရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
At 9/23/2012 07:46:00 PM No comments:
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၃ နေပြည်တော်တွင်နှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပနေသည့် ရခိုင်ဒေသ ရခိုင်ပြည်နယ်ရေရှည် တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တွင်တက်ရောက်နေသည့် ရခိုင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မွတ်စလင်ဘာသာ ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်စလင် အမျိုးသမီးများ ကိုမြန်မာ့လူမှု အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လိုက်လျော ညီထွေနေထိုင်နိုင်ရေး အတွက်ခေတ်ပညာများ သင်ကြားပေး ရန်လိုကြောင်း အဆိုတစ်ခုကိုသာ သဘောတူညီ မှုရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
At 9/23/2012 07:45:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆားတန်ချိန်တစ်သောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝယ်ယူ
ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စနှင့် သော်လည်း ကောင်း၊ နယ်စပ်ရေးရာ ရေပိုင်ဆိုင်မှု ကိစ္စနှင့် သော်လည်းကောင်း ယခင်က ဆက်ဆံရေး ပြေလည်မှု မရှိခဲ့သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရှစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆားတန်ချိန် တစ်သောင်း ဝယ်ယူ ရန် ပြန်လည် ပြီး ပြောဆိုထားကြောင်း ရခိုင်ဒေသခံ ဆားကုန်သည် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသန်းရွှေက The Voice Weekly သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
At 9/23/2012 07:44:00 PM No comments:
လွမ်းစိမ့်ဇာတ်ကားမှာ ရဲတိုက်နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ထား တဲ့ နိုဘယ်ကျော်ကျော်
ဖူးငုံ ပရိသတ်တို့ အတွက် လစဉ် ပါဝင်နေကျ အလှအပ ကဏ္ဍလေးကနေ စက်တင်ဘာလ အတွက် ဖော်ပြ ပေးချင်တဲ့ မင်းသမီးလေး ကတော့ အနုပညာ လောကထဲကို ၀င်ရောက်လာကတည်းက ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့မို့ ဆံကေသာ ထိန်းသိမ်းဆီ ကြော်ငြာလေးတွေနဲ့ ပရိသတ် အမြင် အာရုံထဲ ၀င်ရောက် လာသူလေး နိုဘယ်ကျော်ကျော်ရဲ့ အလှအပ ထိန်းသိမ်းမှုလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
At 9/23/2012 05:37:00 PM No comments:
ယွက်ဆစ်ဟာ အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်ထားတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အခွင့်အရေးတွေ ကို ရနိုင်သမျှယူဖို့ ကြိုးပမ်း နေပါ တယ်။ နိုင်ငံရေးဘက်မှာ တစ်သက်လုံးက မူးယစ်ဆေးဝါး လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နာမည်ဆိုးကြီးကို ဖျောက်ပစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်။ စီးပွားရေးဘက်မှာ အစိုးရဆီက တောင်းလို့ ရသမျှတောင်းပြီး တစ်ဖက်ကလည်း ငွေရလွယ်တဲ့ မူးယစ် ဆေးဝါး အလုပ်ကို လက်မလွှတ်စတမ်း ဆက် လုပ်နေဆဲပါပဲ။
At 9/23/2012 05:34:00 PM No comments:
ပြဿနာမရှိပါဘူး . . .
''ဆရာ လွှတ်တော်မှာ ပြဿ နာတွေအများကြီးပဲ'' ကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်တယ်။
''ဆရာ ရခိုင်မှာ ပြဿနာတွေ အများကြီးပဲ'' ကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်တယ်။
''ဆရာ ကချင်မှာ ပြဿနာတွေ အများကြီးပဲ'' ကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်တယ်။
ပညာရေး၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ရာသီဥတု၊ နောက် ခုံရုံးပြဿနာ။ ပြဿနာတွေ အများကြီးပဲ။ ကျွန်တော်ခေါင်းစားသလား၊ ဦးနှောက်ပဲကြီးထွားလာလား မသိပါ။ အများကြီး တွေးနေမိတယ်။ ဘာမှ မလုပ်သူတွေအတွက်တော့ ဘာပြဿ နာမှမရှိဘူးပေါ့။ အလုပ်လုပ်ရင် ပြဿနာတွေ ရှိမှာပေါ့။
At 9/23/2012 03:11:00 PM No comments:
ရန်ကုန်က နံမည်ကြီး ဆေးရုံတစ်ရုံက တလွဲ ဖြစ်ရပ်မှန်
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက Venus Thet Htar ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ပုဂ္ဂလိက အထူးကုဆေးရုံတစ်ခု၏ ဆေးစစ်ဆေးချက်အဖြေ မှားယွင်းခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအား Post တစ်ခုအဖြစ်တင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ Eleven Media Group တွင် ပြန်လည်ဖော်ပြနိုင်ရန် အဆိုပါ Facebook ပိုင်ရှင်အား ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းအနေဖြင့် ယင်းဖြစ်စဉ်အား ဖြေကြားလိုခြင်းမရှိပါကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားလာပါသဖြင့် Venus Thet Htar ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော Post အား ပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
At 9/23/2012 02:48:00 PM 1 comment:
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၇ ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲကျော်စွာ ၄ လမ်းတွင် ယနေ့(စက်တင်ဘာ ၂၃) မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့သော မီးလောင်မှုမှ မြင်ကွင်းများ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၇ ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲကျော်စွာ ၄ လမ်း၊ အိမ်အမှတ် ၂၀၅ (ဃ)တွင် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၂း၁၅ မိနစ်ဝန်းကျင်မှ စတင်၍ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၂း၅၀ မိနစ်ဝန်းကျင်တွင် မီငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လောင်ကျွမ်းမှုကို မီးသတ်ကား ၂၃ စီးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် ၃ စီးမှ လာရောက် မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့သည်။ လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် နေအိမ်စုစုပေါင်း ၄ လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
At 9/23/2012 02:42:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နယူးယောက်မြန်မာမိသားစုတွေ့ဆုံပွဲ၌ မြန်မာစကားမပြောတတ်သော ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများဆန္ဒပြ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် Queens College ၌ နယူးယောက်မြန်မာ မိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ ဧည့်ပရိတ်သတ် ၃၀၀၀ ကျော်တက်ေ ရာက်ခဲ့ပြီး ခန်းမပြည့်လျံ သွားခဲ့ရသည်။ မြန်မာမိသားစုတွေ့ဆုံပွဲ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြည်ပရောက် မြန်မာများအားအမှာစကား၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား အရေးကြီးပုံ အကြောင်းကိြုေ ပာဆိုခဲ့သည်။အခမ်းအနားအပြီးတွင် ခန်းမအပြင်ဘက်၌ ရိုဟင်ဂျာ အယောက်(၂၀) ခန့်သည် မြန်မာလူထုေ ခါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အား အောင်ဆန်းကြည်ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပြီး
At 9/23/2012 02:08:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် CNN အင်တာဗျုး
CNN ။ ။ ဒေါ်စုကို အရမ်းကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာ တွေ့နေရတယ်နော် ။ အခုဘဲ အမေရိကန် လွှတ်တော်က ပေးတဲ့ Congressional Gold Medal ဆုကို လက်ခံခဲ့ပြီးပြီ ။ နိုဘယ်ဆုလည်း ယူပြီးသွားပြီ ။ ဒေါ်စုကို သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို ကြိုဆိုမှုတွေ တွေ့ရတယ် ။ လူတွေက အကြာကြီးမတ်တပ်ရပ် လက်ခုပ်တွေ တီးကြရင် ဒေါ်စုပုံကို ကြည့်ရတာ သိသိသာသာ မနေတတ် ဖြစ်နေသလိုဘဲ ။ အဲဒါမျိုးလုပ်ကြတာ ဒေါ်စုအတွက် တမျိုးကြီးများ ဖြစ်နေလို့လား ။
At 9/23/2012 01:52:00 PM No comments:
ရေပေါ်ညဈေးနှင့် အပန်းဖြေ နေရာ မော်လမြိုင်တွင် တည်ဆောက်မည်
မွန်ပြည်နယ်၏မြို့တော် မော်လမြိုင်မြို့ ကမ်းနားလမ်းတွင် ရေပေါ်ညဈေးနှင့် အပန်းဖြေနေရာကို ယခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့မှ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများ တွင် ရေးသားထား ချက်များအရ သိရသည်။
At 9/23/2012 01:49:00 PM No comments:
ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား ဟုတ်မဟုတ်ကို တရားဥပဒေအရ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်မည်ြ
နိုင်ငံတော်က ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဆိုသည်မှာ မရှိကြောင်း တရားဝင်ပြောကြားထားသောကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းရန်ဆွေးနွေးချက်ကို ငြင်းဆန်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်အေးနုစိန်က ယနေ့ကျင်းပသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည်ထူထော င်ရေးနှင့် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
At 9/23/2012 01:47:00 PM No comments:
ဆေးထိုးအပ်မလိုအပ်ဘဲ အာထရာဆောင်းဓါတ်မှန်နှင့် ဆေးသွင်းနိုင်ပြီ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မက် ဆက်ချူးဆက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIT) အင်ဂျင်နီယာများက ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်းသို့ ဆေးသွင်းနိုင်မည့် နည်းပညာသစ်တစ်မျိုး တွေ့ရှိခဲ့ကြ သည်။ အာထရာဆောင်းဓါတ်မှန်ကို အသုံးပြု၍ ဆေးထိုးအပ်မလိုဘဲ အရေပြား ဖြတ်ကျော်ဆေးသွင်းနိုင်တော့ မည် ဖြစ်သည်။
At 9/23/2012 01:41:00 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ တစ်ပြေးညီဖွံ့ဖြိုးစေရန် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မင်းဓမ္မ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအပါအ၀င် ဒုတိယဗဟိုစီးပွားရေဇုန်ငါးခု တည်ဆောက်မည်
ရန်ကုန်မြို့ကြီး တစ်ပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်များ ဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း ထောက်ပြ ထားပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဒုတိယဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် (Secondary Central Business District) ငါးခုကို တည်ဆောက် သွားမည့်စီမံကိန်းများရှိနေသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၏ ရန်ကုန်မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း Conceptual Plan တင်ပြချက်မှ သိရသည်။
At 9/23/2012 01:35:00 PM No comments:
နှစ်သိန်းဖုန်းများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ ဈေးနှုန်းလျော့ချ ရောင်းချရန် အစီအစဉ်မရှိသေးဟုဆို၊ နှစ်သိန်းတန်ဖုန်းအလုံးရေ ရှစ်သိန်းဝန်းကျင် ရောင်းချပြီးနောက် ကျပ်ငွေ ဘီလျံ ၁၆၀ ရရှိပြီးဖြစ်ရာ ဈေးနှုန်းမလျှော့ခြင်းသည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ခရိုနီများအတွက်သာဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ ထိခိုက်စေသောလုပ်ရပ်အဖြစ် ဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်
နှစ်သိန်းဖုန်းများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ ဈေးနှုန်းလျော့ချ ရောင်းချရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း မှ သိရှိရသည်။ လက်ရှိ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မိုဘိုင်းဖုန်းများကို အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်း တစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ်နှစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ရောင်းချ လျက်ရှိပြီး အဆိုပါ အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းကို ယခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဈေးနှုန်းများ ထပ်မံ လျော့ချရန် မရှိသေးကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်မှာ လုပ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ နုနုနဲ့ ငယ်ငယ်
၂၀၁၂ အမေရိက န်နွေရာသီကျော င်းပိတ်ရက်မှာ မြန်မာပြည်၊ နွယ်ခွေရပ်၊ မေတ္တာနန္ဒ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းမှာ ၂လ လုံးလုံး သွားရောက်နေထိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်း စေတနာ့ ၀န်ထမ်းခဲ့သူ ဆန်ဖရန်ေ ဘးဧရိ ယာက မြန်မာနွယ်ဖွား၊ ဆယ်ကျော်သက် ရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသူ နုနု နဲ့ ငယ်ငယ်တို့ကို သူတို့ မိဘများနဲ့အတူ သူတို့မိသားစု အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်တွေကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
At 9/23/2012 01:26:00 PM No comments:
လုံးရာက ပြားရရှာတဲ့ ငါးတို့ရဲ့ဇာတ်
"ငါးတွေသေရတဲ့ အဓိက တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုရှိသတဲ့။ ပြင်ပထိခိုက်ရခြင်းနဲ့ တခြားအခြေအနေကတော့ မဇာတ်ဝင်ခြင်းခေါ်တဲ့ လိင်အတွင်းကိစ္စပါပဲ တဲ့"
''ခုတော့ ဣတ္တိယမို့၊ ပုရိသာ တစ်ခါပျောက်ပါပေါ့၊ ကံဇာတာမှောက်သူ၊ ဘယ်မကူလို့၊ အငယ်ဟို လူနောက်ကြင်ခဲ့တဲ့တမေ့ကိုလ၊ တကယ်ချိုမြှူတစ်ယောက်ခင်နဲ့ တွေ့ရင်၊ ဓလေ့ကို မာဂဓာနှောရပါလိမ့်၊ ရှောလို့ကုန်ပါပကွယ့်၊ မယ်ဘဒ္ဒရဲ့၊ ခရမ်းဆင်စွယ်အရှည်တစ်တွဲ။''
At 9/23/2012 10:18:00 AM No comments:
တောင်ငူမှာ ရထား နှင့် ကား တိုက်မိ
စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ည ၁၀နာရီအချိန်တွင် တောင်ငူမြို့ မြောက်ဘက်အထွက်တောင်ငူမြို့ မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံကားကြီးဝန်း(ဖိုးတာတီးဂိတ်)သို့အ၀င် ပေါ်တော်မူမီးရထားသံလမ်းဂိတ်တွင် ရန်ကုန်မှာ ညနေ
၃ရီတွင် စတင်ထွက်ခွာလာသော ၇န်ကုန်-မန္တလေး အမှတ်(၅) အဆန်အမြန်ရထားသည်လွိုက်ကော်မှ ရန်ကုန်သို့ ထွက်ခွာလာသော ရွှေရာဇာ နီညိုရောင်မှန်လုံအမြန်ယာဉ်အား ၀င်တိုက်မှုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းသည် မြန်မာ-တရုတ်ဆက်ဆံရေးကို ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တရုတ်ဒုတိယသမ္မတ Xi Jinping တို့ တရုတ်နိုင်ငံ နန်နင်းမြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ် Photo:Xinhua
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းသည် မြန်မာ-တရုတ် ဆက်ဆံရေးကို ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တရုတ်ဒုတိယသမ္မတ Xi Jinping နှင့် တွေ့ဆုံရာ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ရိုက်တာနှင့်ဆင် ဟွာသတင်းတို့ တွင် ဖော်ပြထားချက်အရ သိရသည်။
At 9/23/2012 10:14:00 AM No comments:
VISA ကတ်ကို ပြည်တွင်းသို့ လာရောက်မည့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားများသာ အသုံးပြုနိုင်ဦးမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာမီ အသုံးပြုနိုင်တော့မည့် VISA ကတ်မှာ လတ်တလော ရေတိုကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များသာ အသုံးပြုနိုင်ဦးမည်ဟု အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ အရှေ့တောင်အာရှ၊ သြစတြေးလျနှင့် အိန္ဒိယဆိုင်ရာ Head of Coporate Relations ဖြစ်သူ Mr. Gary Hamilton Walker က ပြောခဲ့သည်။
At 9/23/2012 10:13:00 AM No comments:
လွှတ်တော်တွင်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျမှု မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုရရှိခဲ့ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
လွှတ်တော်တွင်း ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျမှုမှာ မျော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုရရှိခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေချိန်တွင် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
At 9/23/2012 10:12:00 AM No comments:
နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့ဦးကျေးရွာ အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း ၁၀၀ နီးပါးလောက်ကို မြို့နယ် မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနက လယ်ယာမြေပေါ် ကျူးကျော်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်တွေဆိုပြီး ပုဒ်မ ၄၈(က)နဲ့ တရားစွဲ၊ ဖိအားပေး ဖျက်ခိုင်းနေတဲ့ အတွက် အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆိုသလို နေအိမ်တွေကို ဖျက်ပေးနေရတယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
At 9/23/2012 10:10:00 AM No comments:
မြန်မာနဲ့ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံကြား စစ်ရေးအရ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့် အစီစဉ်တွေပြန်ပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရေးနှစ်ဘက် ကာကွယ်ရေး ထိပ်တန်းအရာရှိ တွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ Financial Times သတင်းစာ ကြီးကဒီကနေ့ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ အာဏာနိုင်ငံရေးထဲပါဝင်စွက်ဖက်နေတာထက် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လာနိုင်အောင် အမေရိကန်ဘက်က ကူညီပံပိုးပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်လို့ ဗဟုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်သူငြိမ်းကပြောပါတယ်။
At 9/23/2012 10:09:00 AM No comments:
ကေအိုင်အေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေး အပိုင်း(၁)
ကေအိုင်အေနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး မှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့လို့ အခုအချိန်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးမရတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ စဉ်းစား ဖို့လိုလာပါပြီ။ နှစ်ဘက်စလုံး က ဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့ တကယ်တန်းကျတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ အလှမ်းဝေးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
At 9/23/2012 10:08:00 AM No comments:
At 9/23/2012 10:06:00 AM No comments:
နေအိမ်ခန်းအသွင်သုံးနိုင်မည့် ပေါင်တစ်သန်းကျော်တန် ဇိမ်ခံဘတ်စ်ကား
နေအိမ်ခန်းတစ်ခုအသွင် အသုံးပြုနိုင်သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ပါဝင်သည့် Volkner Mobile Performance Bus ဟု အမည်ပေးထားသော ဇိမ်ခံဘတ်စ်ကားကြီး၏ တန်ဖိုးမှာ ပေါင်စတာလင် ၁ ဒသမ ၂ သန်းအထိပင်ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကားကြီးပေါ်တွင် အိပ်ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ ရေချိုးခန်းနှင့် အခြား ဇိမ်ခံဖျော်ဖြေးရေးပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ပြိုင်ကားအရွယ် Ferrari သို့မဟုတ် Lamborghini စူပါကားတစ်စီးကိုလည်း ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
At 9/23/2012 10:05:00 AM No comments:
အထိုင်များသော အလုပ်ကြောင့် စောစောစီးစီး သေဆုံးစေနိုင်
တစ်ခါထိုင်ရင် သုံး-လေးနာရီကျော်ကြာ တဲ့သူတွေကို လေ့လာ ခဲ့ရာ စောစောစီးစီး သေဆုံးနို င်ခြေ မြင့်မားေ နတယ်လို့ လေ့လာမှု နှစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်ေ လ့လာမှုအရ တစ်နေ့ ခြောက်နာရီထက် ပိုမိုထိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ် တဲ့ အမျိုးသမီးေ တွက အချိန်မတို င်မီ စောစောသေဆုံးနိုင်ခြေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း၊ အမျိုးသားတွေမှာတော့ အချိန်မတိုင်မီ စောစောသေဆုံးနိုင်ခြေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း
At 9/23/2012 10:03:00 AM No comments:
မြန်မာမူးယစ်ရာဇာနှင်.စစ်ခေါင်းဆောင်က မဲခေါင်မြစ်တွင် "တရုတ်သင်္ဘောသားများအားသတ်ခဲ.သည်ဟု တရားရုံးတွင် ဖြောင်. ချက်ပေး"
အာရှလေဘာတီ စနေနေ.၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၁၂
မူးယစ်ရာဇာနှင်. လက်နက်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဟုသင်္ကာမကင်းဖြစ် ခံရသော မြန်မာပြည်မှရှမ်းလူမျိုး စိုင်းနော်ခမ်းနှင်. အပေါင်းအပါ ငါးဦးတို.သည် မနှစ်က မဲခေါင်မြစ်ထဲတွင် တရုတ်သင်္ဘောသား ၁၃ ဦးကို သူတို.သတ်ခဲ.သည်ဟု တရုတ်ပြည်တရားရုံး ၌ ဖြောင်.ချက်ပေးခဲ.ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ပိုင်သတင်းမီဒီယာများက ယနေ.ကြေငြာသွားသည်။
At 9/23/2012 10:00:00 AM No comments:
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၂၀ မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်
လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များက ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် လျောက်ထားခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များနှင့် ပတ်သက်သည်တို့ကို ရှင်းလင်းနေစဉ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များက ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက်ဆိုင်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
At 9/23/2012 12:21:00 AM No comments: